အစ်ကိုနဲ့ ညီမကြားက ပြဿနာ ပေါင်းချုပ် - For her Myanmar
အစ်ကိုနဲ့ ညီမကြားက ပြဿနာ ပေါင်းချုပ်
Brother of the year ထဲကလိုပေါ့။
<<< Zawgyi >>>
အစ်ကိုတွေအကြောင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စာဖွဲ့လို့တောင် မကုန်နိုင်ဘူးရယ်။ နှစ်ယောက်တည့်နေရင်တော့ ကိုကိုရေ..ညီမလေးရေ..။ မတည့်ရင်တော့ နင်တစ်လုံး၊ ငါတစ်လုံး အော်ကြဟစ်ကြ ရန်ဖြစ်ကြ။ သိတယ်မလား မတည့်အတူနေလေ။ ဒါဆို အစ်ကိုနဲ့ ညီမကြားမှာ အမြဲကြုံရတဲ့ ပြဿနာပေါင်းချုပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမွန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိသွားရင်တော့ shake ပေါ့နော်။
ယောင်းရဲ့ အထက်မှာ အစ်ကိုတွေ ၊ အစ်မတွေ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ အဝတ်အစားကို သေချာပေါက် ယူဝတ်ဖူးမှာပါ။ ညီအစ်မ အချင်းချင်း ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း ဆိုရင် သိပ်ကိစ္စမရှိပေမဲ့ အစ်ကိုနဲ့ ညီမကျတော့ ခန္ဓာကိုယ် ဆိုက်လည်း မတူ ။ ဝတ်စားပုံလည်း မတူဆိုတော့ တချို့အစ်ကိုတွေက ဘုန်းနိမ့်မှာ ကြောက်လို့ ပေးမဝတ်ချင်ဘူးရယ်။ အိမွန် ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုရင် အစ်ကို့အင်္ကျီတွေ ဘောင်းဘီတွေကို ယူဝတ်တာပဲ။ နောက်ပိုင်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှသာ ယူမဝတ်ဖြစ်တော့တာ။ ဒါတောင် တစ်ခါတလေ အင်္ကျီပွပွဆိုရင်တော့ သမလိုက်တာပဲ ဟီးဟီး..
အကြီးနဲ့ အငယ်ရန်ဖြစ်လို့ အမေက ဆော်ပလော်တီးပြီဆိုရင် အကြိမ်ရေ နည်းနည်းပဲ ခံရတာက အငယ်တွေပါ။ အငယ်ဆုံးကို အိမ်က အချစ်ဆုံးလေ သိတယ်မလား။ ပြီးတော့ အစ်ကိုဆိုရင် ညီမကို ညှာရမယ်လို့ ဆုံးမပြီး ရိုက်ပေမဲ့ အငယ်ဆုံး သမီးလေးကိုတော့ သိပ်ပြီး မရိုက်ကြဘူးရယ်။ ဒီတော့ကား အစ်ကိုနဲ့ ရန်ဖြစ်တိုင်း အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ငိုပြလိုက်ရင် ကိုယ်တွေက အော်တို လွတ်တာပေါ့။
အစ်ကိုနဲ့တူတူ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးအများစုရဲ့ ပြောပုံဆိုပုံ အမူအရာတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးတွေ များပါတယ်။ ငယ်ငယ်လေးတည်းက အတုခိုးမှားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ဘယ်မှာသိသာလဲဆိုတော့ နာမည်ခေါ်လို့ ထူးရင်တောင် “ဗျာ” ဆိုပြီး ထူးမိတဲ့ အထိပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ယောက်ျားလေး အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင် လူမရှိန်တော့ဘူးလေနော်။
ရုပ်ဆိုးမလို့ ခေါ်တဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသောသူ
ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ သူစိမ်းကသာ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို နင်းပြောတယ် မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အရင်းနှီးဆုံးသောသူဖြစ်ပြီး ကိုယ် ဘယ်လောက်ရုပ်ချောချော လှတယ်လို့ကို မထင်တာက အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်အစ်ကိုပါပဲ။ ယောင်းတို့ရော ထောက်ခံတယ်မလား။ အိမွန်ဆိုရင် ငယ်ငယ်တုန်းက ရုပ်ဆိုးမဆိုပြီး ခဏခဏ အစခံရတယ်။ ခုလို လှလာတဲ့အချိန် ရောက်တော့မှ မစတော့တာ။ အဲ့လယ်..
Related article>>>မောင်တွေ အစ်ကိုတွေပဲရှိသူတွေက ဘာကြောင့်အစ်မရှိသူတွေကို အားကျကြတာလဲ
မောင်နှမတွေ လမ်းထွက်ပြီဆိုရင် အစ်ကိုနဲ့ ညီမလို့ ထင်ကြတာက နည်းပါတယ်။ အတွင်းသိ အစင်းသိတွေလောက်ပဲ မောင်နှမလို့ မြင်ကြတာ။ ကိုယ်နဲ့ ဓာတ်မသိသူတွေကတော့ ယုန်ထင်ကြောင်ထင်ပေါ့။ တချို့မောင်နှမတွေဆိုရင် ရုပ်ချင်းမဆင်လေတော့ ပိုဆိုး။ အိမွန်တို့ မောင်နှမဆိုလည်း ရုပ်ချင်းမဆင်လေတော့ တူတူလမ်းထွက်ရမှာတောင် သိပ်မကြိုက်ဘူး။ တော်ကြာ ကိုယ့်ကို crush တဲ့လူတွေ လျော့သွားဦးမယ် ငိငိ
အစ်ကိုနဲ့ ညီမဆိုတာ စိတ်ဆိုးရင်သာ ပါးစပ်ထဲ ရှိသမျှ အလုံးတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ပြောဆိုပြီး ရန်ဖြစ်ကြတာ။ တကယ်တမ်း သူများနဲ့သာ ဖြစ်ကြည့်၊ ကိုယ့်ညီမလေးဘက်က ဝိုင်းပြီး နာပေးမယ့် အစ်ကိုတွေချည်းပဲ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ငါ့ညီမကို ထိရဲထိကြည့်..သေတွားမယ် ရှင်တွားမယ် မသေမရှင်ဖြစ်သွားမယ် ဆိုတာမျိုး။ ယောက်ဖလို့များ သူများက ခေါ်ရင် သူက ဦးအောင် မင်းအမ ငါ့ပေးဆိုပြီး ပြောတတ်တဲ့ အစ်ကိုမျိုး။ ဒီလို အားကိုးရတဲ့ စူပါဟီးရိုး အစ်ကိုပေါ့။
ငယ်ငယ်လေးတည်းက အစ်ကိုဆိုတာ ညီမလေးကို ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ စံနှုန်းနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တော့ သူတို့ရဲ့ မသိစိတ်ထဲမှာ အငယ်ကသာ နံပါတ်တစ်ပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ရန်ဖြစ်ရန်ဖြစ် သူတို့ချစ်တာက ဒီညီမလေးကိုပါပဲ။ မိဘတွေက အငယ်ဆုံးမို့ အချစ်ပိုပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးတာတွေရှိရင် သည်းခံစိတ်နဲ့ အပြစ်မမြင်ဘဲ နားလည်ပေးတာက အစ်ကိုကြီးတွေပါပဲ။
အစ်ကိုနဲ့ ညီမအကြောင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာဆုံးတဲ့ထိအောင် ပြောလို့ကုန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ယောင်းရေ။ ကမ္ဘာပေါ်က ယောက်ျားလေးတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကို အချစ်ဆုံးက အဖေပြီးရင် အစ်ကိုပါပဲ။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အကောင်းအဆိုး ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့အချိန် ရုပ်ဆိုးတဲ့အချိန် အားလုံးကို ကြည့်ရင်း တူတူကြီးပြင်းလာကြသူတွေပဲလေ။ အံမယ် သူငယ်ချင်းတွေကိုသာ အစ်ကို့အကြောင်း ဘယ်လိုဘယ်ဝါ လျှောက်ပြောတာနော် ယောက်မလို့ လာခေါ်ရင်တော့ မကြိုက်ချင်ဘူးရယ်။ ဒါကြောင့်ပြောပါတယ် မတည့်အတူနေပါလို့။
ယောင်းတို့ရဲ့ အစ်ကိုအကြောင်းလည်း အတင်းတုပ် (အဲ..မှားလို့) ဝေမျှသွားဦးနော်..
Brother of the year ထဲကလိုပေါ့။
အဈကိုတှအေကွောငျး ပွောရမယျဆိုရငျတော့ စာဖှဲ့လို့တောငျ မကုနျနိုငျဘူးရယျ။ နှဈယောကျတညျ့နရေငျတော့ ကိုကိုရေ..ညီမလေးရေ..။ မတညျ့ရငျတော့ နငျတဈလုံး၊ ငါတဈလုံး အျောကွဟဈကွ ရနျဖွဈကွ။ သိတယျမလား မတညျ့အတူနလေေ။ ဒါဆို အဈကိုနဲ့ ညီမကွားမှာ အမွဲကွုံရတဲ့ ပွဿနာပေါငျးခြုပျလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ အိမှနျနဲ့ တိုကျဆိုငျမှုတှေ ရှိသှားရငျတော့ shake ပေါ့နျော။
ယောငျးရဲ့ အထကျမှာ အဈကိုတှေ ၊ အဈမတှေ ရှိတယျဆိုရငျတော့ သူတို့ အဝတျအစားကို သခြောပေါကျ ယူဝတျဖူးမှာပါ။ ညီအဈမ အခငျြးခငျြး ညီအဈကိုအခငျြးခငျြး ဆိုရငျ သိပျကိစ်စမရှိပမေဲ့ အဈကိုနဲ့ ညီမကတြော့ ခန်ဓာကိုယျ ဆိုကျလညျး မတူ ။ ဝတျစားပုံလညျး မတူဆိုတော့ တခြို့အဈကိုတှကေ ဘုနျးနိမျ့မှာ ကွောကျလို့ ပေးမဝတျခငျြဘူးရယျ။ အိမှနျ ငယျငယျတုနျးက ဆိုရငျ အဈကို့အင်ျကြီတှေ ဘောငျးဘီတှကေို ယူဝတျတာပဲ။ နောကျပိုငျး အရှယျရောကျလာတဲ့ အခါမှသာ ယူမဝတျဖွဈတော့တာ။ ဒါတောငျ တဈခါတလေ အင်ျကြီပှပှဆိုရငျတော့ သမလိုကျတာပဲ ဟီးဟီး..
အကွီးနဲ့ အငယျရနျဖွဈလို့ အမကေ ဆျောပလျောတီးပွီဆိုရငျ အကွိမျရေ နညျးနညျးပဲ ခံရတာက အငယျတှပေါ။ အငယျဆုံးကို အိမျက အခဈြဆုံးလေ သိတယျမလား။ ပွီးတော့ အဈကိုဆိုရငျ ညီမကို ညှာရမယျလို့ ဆုံးမပွီး ရိုကျပမေဲ့ အငယျဆုံး သမီးလေးကိုတော့ သိပျပွီး မရိုကျကွဘူးရယျ။ ဒီတော့ကား အဈကိုနဲ့ ရနျဖွဈတိုငျး အျောကွီးဟဈကယျြ ငိုပွလိုကျရငျ ကိုယျတှကေ အျောတို လှတျတာပေါ့။
အဈကိုနဲ့တူတူ ကွီးပွငျးခဲ့ရတဲ့ မိနျးကလေးအမြားစုရဲ့ ပွောပုံဆိုပုံ အမူအရာတှကေ ခပျကွမျးကွမျးလေးတှေ မြားပါတယျ။ ငယျငယျလေးတညျးက အတုခိုးမှားတယျလို့ ပွောရမယျ။ ဘယျမှာသိသာလဲဆိုတော့ နာမညျချေါလို့ ထူးရငျတောငျ “ဗြာ” ဆိုပွီး ထူးမိတဲ့ အထိပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကောငျးတဲ့အခကျြကတော့ ယောကျြားလေး အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ တှရေ့ငျ လူမရှိနျတော့ဘူးလနေျော။
ရုပျဆိုးမလို့ ချေါတဲ့ အရငျးနှီးဆုံးသောသူ
ကိုယျနဲ့ မရငျးနှီးတဲ့ သူစိမျးကသာ ကိုယျ့အားနညျးခကျြကို နငျးပွောတယျ မထငျလိုကျပါနဲ့။ အရငျးနှီးဆုံးသောသူဖွဈပွီး ကိုယျ ဘယျလောကျရုပျခြောခြော လှတယျလို့ကို မထငျတာက အရငျးနှီးဆုံးဖွဈတဲ့ ကိုယျ့အဈကိုပါပဲ။ ယောငျးတို့ရော ထောကျခံတယျမလား။ အိမှနျဆိုရငျ ငယျငယျတုနျးက ရုပျဆိုးမဆိုပွီး ခဏခဏ အစခံရတယျ။ ခုလို လှလာတဲ့အခြိနျ ရောကျတော့မှ မစတော့တာ။ အဲ့လယျ..
Related article>>>မောငျတှေ အဈကိုတှပေဲရှိသူတှကေ ဘာကွောငျ့အဈမရှိသူတှကေို အားကကြွတာလဲ
မောငျနှမတှေ လမျးထှကျပွီဆိုရငျ အဈကိုနဲ့ ညီမလို့ ထငျကွတာက နညျးပါတယျ။ အတှငျးသိ အစငျးသိတှလေောကျပဲ မောငျနှမလို့ မွငျကွတာ။ ကိုယျနဲ့ ဓာတျမသိသူတှကေတော့ ယုနျထငျကွောငျထငျပေါ့။ တခြို့မောငျနှမတှဆေိုရငျ ရုပျခငျြးမဆငျလတေော့ ပိုဆိုး။ အိမှနျတို့ မောငျနှမဆိုလညျး ရုပျခငျြးမဆငျလတေော့ တူတူလမျးထှကျရမှာတောငျ သိပျမကွိုကျဘူး။ တျောကွာ ကိုယျ့ကို crush တဲ့လူတှေ လြော့သှားဦးမယျ ငိငိ
အဈကိုနဲ့ ညီမဆိုတာ စိတျဆိုးရငျသာ ပါးစပျထဲ ရှိသမြှ အလုံးတှနေဲ့ ပဈပေါကျပွောဆိုပွီး ရနျဖွဈကွတာ။ တကယျတမျး သူမြားနဲ့သာ ဖွဈကွညျ့၊ ကိုယျ့ညီမလေးဘကျက ဝိုငျးပွီး နာပေးမယျ့ အဈကိုတှခေညျြးပဲ။ ဟုတျတယျဟုတျ? ငါ့ညီမကို ထိရဲထိကွညျ့..သတှေားမယျ ရှငျတှားမယျ မသမေရှငျဖွဈသှားမယျ ဆိုတာမြိုး။ ယောကျဖလို့မြား သူမြားက ချေါရငျ သူက ဦးအောငျ မငျးအမ ငါ့ပေးဆိုပွီး ပွောတတျတဲ့ အဈကိုမြိုး။ ဒီလို အားကိုးရတဲ့ စူပါဟီးရိုး အဈကိုပေါ့။
ငယျငယျလေးတညျးက အဈကိုဆိုတာ ညီမလေးကို ဦးစားပေးရမယျဆိုတဲ့ စံနှုနျးနဲ့ ကွီးပွငျးလာခဲ့တော့ သူတို့ရဲ့ မသိစိတျထဲမှာ အငယျကသာ နံပါတျတဈပါ။ ဘယျလောကျပဲ ရနျဖွဈရနျဖွဈ သူတို့ခဈြတာက ဒီညီမလေးကိုပါပဲ။ မိဘတှကေ အငယျဆုံးမို့ အခဈြပိုပွီး ဖွညျ့ဆညျးပေးတာတှရှေိရငျ သညျးခံစိတျနဲ့ အပွဈမမွငျဘဲ နားလညျပေးတာက အဈကိုကွီးတှပေါပဲ။
အဈကိုနဲ့ ညီမအကွောငျး ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ဒီစာဆုံးတဲ့ထိအောငျ ပွောလို့ကုနျမှာ မဟုတျပါဘူး ယောငျးရေ။ ကမ်ဘာပျေါက ယောကျြားလေးတှထေဲမှာ ကိုယျ့ကို အခဈြဆုံးက အဖပွေီးရငျ အဈကိုပါပဲ။ ငယျငယျလေးကတညျးက ကိုယျ့ဘဝရဲ့ အကောငျးအဆိုး ခဈြဖို့ ကောငျးတဲ့အခြိနျ ရုပျဆိုးတဲ့အခြိနျ အားလုံးကို ကွညျ့ရငျး တူတူကွီးပွငျးလာကွသူတှပေဲလေ။ အံမယျ သူငယျခငျြးတှကေိုသာ အဈကို့အကွောငျး ဘယျလိုဘယျဝါ လြှောကျပွောတာနျော ယောကျမလို့ လာချေါရငျတော့ မကွိုကျခငျြဘူးရယျ။ ဒါကွောငျ့ပွောပါတယျ မတညျ့အတူနပေါလို့။
ယောငျးတို့ရဲ့ အဈကိုအကွောငျးလညျး အတငျးတုပျ (အဲ..မှားလို့) ဝမြှေသှားဦးနျော..
Tags: brother, Family, Fun, realationship, Relationship, Sister
Potterhead မှန်ရင်တော့ ဒါလေးတွေ သိသင့်ပါတယ်နော်..
မိန်းကလေးတိုင်း ပြေးမလွတ်သော ချင်း (ဂျင်း) - ၅ မျိုး
Ei Mon November 28, 2018